मान्छे नभएको मौका पारी ल्यापटप र टिभि चोरी - Abhiyan news
२८ श्रावण २०७८, बिहीबार १३:२१ अभियान न्यूजLeaveaComment on मान्छे नभएको मौका पारी ल्यापटप र टिभि चोरी
गुल्मीमा गएराती घरमा मान्छे नभएको मौका पारी ल्यापटप र टिभि चोरी भएको छ । जिल्लाको धुर्कोट गाउँपालिका वडा नं ४ बर्बोट निवासी लक्ष्मी खनालको घरबाट ल्यापटप र एल इ डि टिभि चोरी भएको इलाका प्रहरी कार्यलय पुर्कोटका प्रहरी निरीक्षक गोपाल रायमाझीले जानाकारी दिए ।
स्थानीय झुपा सामातले घरको ढोका खुल्ला भएको देखेपछी बस्तु प्रहरी चौकीका प्रहरी सहायक निरीक्षक लोकमान ताम्राकारलाइ खबर गरेपछी बस्तु प्रहरीको टोलि चोरी भएको स्थानमा पुगेको थियो । चोरी घटनाको अनुसन्धानका लागि बस्तु प्रहरीले ईलाका प्रहरी कार्यलय पुर्कोटका प्रहरी निरीक्षक गोपाल रामयझीलाई खबर गरेका थिए ।
लकडाउनमा बिद्यालयको पठनपाठन बन्द भएको समयमा आफु बुटवल गएको र त्यसबेला घरमा कुनै मान्छे नभएको मौका पारी सामान चोरी गरेको लक्ष्मी प्रसाद खनालले जानाकारी दिए । घरमा चोरी भएको खबर पाएपछी बुटवलबाट धुर्कोट फर्किसकेको खनालले जनाकारी दिए ।खनालको घर धुर्कोट गाउँपालिकाको केन्द्र नजिकै रहेको छ । चोरी घटनाको बारे अनुसन्धान भईरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
जहाँ धेरै कर्मचारीहरु छन् त्यहाँ संक्रमणको जोखिम उच्च ! साबधानी यसरी अप्नाउनुहोस
राष्ट्र बैंकले आज मौद्रिक नीति आज सार्वजनिक गर्ने
बिचल्ली भएपछि पीडा कसले हेर्ने ?
८ भाद्र २०७८, मंगलवार १२:५७ अभियान न्यूज